I-china Brand bagï¼ŒIsikhwama sokufundaï¼Œ Abenzi, abahlinzeki, Ifektri - Isikhwama somkhiqizo esenziwe ngokwezifisoï¼ŒIzilinganiso - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ubhaka owodwa wehlombe
I-Zhihao Isikhwama Sesikhwama singenye yabakhiqizi bezikhwama zabafundi nabathengisi baseChina. Sicela uzizwe ukhululekile ukuthenga ikhwalithi ephezulu ye-Brand bag highIsikhwama sokufunda esitokweni lapha bese uthola ikhotheshini efektri yethu. Futhi, insizakalo eyenziwe ngezifiso iyatholakala.
(1) Ngemuva kokuthi isampula selithengisiwe, uma inguqulo yokuqala idinga ukuguqulwa, sizoguqula isampula ngokuya ngemininingwane yokuguqulwa. Le nqubo imahhala ngokuphelele. (2) Sizokwazisa ngenqubekela phambili yokukhiqizwa komkhiqizo we-oda ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukuze ukwazi ukuqonda isimo se-oda ngokushesha (3) Sizoxhumana njalo amahora angama-24. Sizosebenzisa ukuxhumana okusebenzayo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ebushelelezi.
Ubhaka wekhompyutha ephathekayo
(1) Lesi sikhwama sekhompyutha ephathekayo sokulwa nokweba sinezici zokungenwa ngamanzi, umthwalo owehlisiwe, ukumunca ukushaqeka, ukugqoka ukumelana, impilo yokusebenza isikhathi eside, kanye nemisebenzi eminingi. (2) Ungasebenzisa lesi sikhwama se-laptop sokulwa nokweba ukugcina kalula umsebenzi wakho i-laptop nezesekeli ezisemaphethelweni njengekhibhodi, igundane, i-U disk, i-mobile disk, njll. ngesikhathi sezingxoxo zebhizinisi, emsebenzini, kwezokuvakasha, ngohambo lwebhizinisi kanye nokuzilibazisa. (3) Yenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme, umkhiqizo omuhle kufanele ungahlukeki kusuka phezulu izinto zokusetshenziswa zekhwalithi kanye nobuchwepheshe obuhle bokuthunga. (4) Sihlome lo bhaka we-laptop wokulwa nokweba nge-anti-theft code lock, engavikela kahle izinto z......
Ubhaka wekhompyutha weLadies
(1) Lesi sikhwama sekhompyutha sowesifazane sinezici zokungenwa ngamanzi, ukumelana nokuklwebheka, ukunciphisa umthwalo, ukumunca ukwethuka, ukumelana nokugqoka, impilo ende yensizakalo, nokusebenza okuningi. (2) Indwangu yangemuva engemuva ingasiza ngempumelelo emuva ukushabalalisa ukushisa, gcina umoya ungenisa umoya futhi womile, futhi uvikele impilo yomsebenzisi.
Ubhaka wekhompyutha wabesilisa
(1) Iyunithi yokuthengisa: ngayinye. (2) Usayizi wephakheji owodwa ongashintshi: 48cm X 32cm X 12cm, singenza ngokwezifiso usayizi wephakheji wokuklama ngokuya ngezidingo zakho, ukuze sikusindisele impahla. (3) Ukupakisha imininingwane: 50cm X 36m X 78cm. 10PCS / ibhokisi. Impahla ye-Carton: K = K ungqimba lukathayela olu-5-layer. (4) Indlela yokuhamba: ulwandle, umoya, umhlaba. Sizokhetha indlela enhle kakhulu yokuthuthwa kwempahla.
Ubhaka we-Laptop eyi-intshi ayi-17
(1) Ngemuva kokuthi isampula selithengisiwe, uma uhlelo lokuqala ludinga ukuguqulwa, sizoguqula isampula ngokwemininingwane yokuguqulwa. Yonke inqubo yokukhiqiza isampula yohlelo lwesibili imahhala ngokuphelele. (2) Sizokwazisa ngenqubekela phambili yokukhiqizwa komkhiqizo we-oda ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukuze ukwazi ukuqonda isimo se-oda ngokushesha okukhulu. (3) Sizokwenza thintana amahora angu-24. Sizosebenzisa ukuxhumana okusebenzayo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ebushelelezi
Ubhaka weLaptop we-15.6-intshi
(1) Lesi sikhwama se-laptop esingu-15.6-intshi sinezici zokungenwa ngamanzi, ukumelana kokuqala, ukunciphisa umthwalo, ukumunca ukushaqeka, ukugqoka ukumelana, impilo ende yensizakalo, nokusebenza okuningi. (2) Iphaneli langemuva lokucindezela elishisayo elenza ingasiza ngempumelelo ukusabalalisa ukushisa kwangemuva, gcina umoya ungenisa umoya futhi womile, futhi uvikele impilo yomsebenzisi. (3) Ungasebenzisa lesi sikhwama se-laptop esingu-15.6-intshi ukugcina kalula i-laptop yakho yokusebenza nezinsimbi zomngcele, ezifana nekhibhodi, igundane, i-U disk , i-mobile disk, njll ngesikhathi sezingxoxo zebhizinisi, emsebenzini, kwezokuvakasha, ngohambo lwebhizinisi nokuzilibazisa. , Ungafaka futhi izingubo, izinto zokugeza, izikhwama zemali, izambulela, amaketela nezinye izinto ezisetshenziswa ......